Ahoana ny fomba hisorohana ny sifotra tsy hianika hazo sy zavamaniry taho - Ikkaro
firosoana >> zaridaina >> Patch legioma >> Sakana varahina ho an'ny sifotra
Tsotra ny hevitra. Ny sifotra dia toa mankahala ny varahina ary tsy sahy miampita azy. Noho izany dia horodirintsika amin'ny varahina fotsiny ireo hazo ireo mba tsy hiakaran'izy ireo. Tsy mampiditra herinaratra na zavatra hafa ianao. tsotra fotsiny fa tsy tian'izy ireo ny fifandraisana amin'ny varahina.
Ity fomba ity dia tsy mamono ny sifotra, na mahatonga azy ireo hanjavona, tsy maintsy mandeha manala azy ianao, fa manakana ny hazonao tsy hameno sy hohanina.
Ity no fomba nananako hazo plum grefy kely.
Varahina fotsiny no mila apetaka aminy. Toa manala ny sifotra ny varahina, tsy tian'izy ireo ny mifandray amin'ity vy ity. Nampiasa tariby mirefy 1,5m 6mm sisa tavela tamin'ny fametrahana lafaoro aho. Tsara kokoa ny mampiasa tariby misy tariby maro hahafahana manarona faritra maro.
Nopotsehintsika izy ireo ary vonona hampiasa. Safidy iray hafa tiako hiezahana ny kasety adhesive varahina, izay ravina varahina izay miendrika kasety toy ny hoe masking tape na kasety elektrika ary miaraka amin'ny adhesive-ny. (Miandry azy io ho tonga aty amiko aho ary hanao fitsapana)
Ary eto dia afaka mahita ny valiny farany isika. Sahabo ho 4 santimetatra ny hazo voasarona. Niezaka nanamafy azy io aho saingy tsy nanindry mafy ilay hazo.
Efa hitanao ny fomba niainan'ilay hazo, nodioviko tamin'ny akorandriaka izy ary navelako tamin'ny tany mba hahafahan'izy ireo miakatra sy manamarina raha tena niasa.
Ary ny sakana dia mahagaga
Tsy misy mandalo
Tsy maintsy esorinao fotsiny izao, fa tsy nisy na dia iray aza.
Fitsapana bebe kokoa
Fanontaniana maro no mipetraka fa hovaliako rehefa hitako ny fivoarany.
Ho very ve ny vokany rehefa mandeha ny fotoana?
Hangeja ny hazo ve izy raha tsy esorintsika?
Misy fitaovana hafa mora vidy kokoa ahafahantsika mahatratra ny vokatra mitovy amin'izany?
Azo ampiasaina ve io teknika io nefa amin'ny fomba ambony?
Ahoana ny fiasan'ny kasety varahina?
Amin'izao fotoana aorian'ny herinandro izao dia mbola mandaitra.
Carolina Reaper na Carolina Reaper
Sokajy Patch legioma Ticket navigation
Washi, ilay taratasy asa-tanana Japoney